Ampidino Microsoft Office 2010 ho an'ny Windows
Ampidino Microsoft Office 2010
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (1.00 MB)
Ampidino Microsoft Office 2010,
Ny famoahana ny kinova anny Microsoft Office 2010, Microsoft dia nanolotra ny rindrambaiko ankafiziny indrindra aminny fiainana orinasa aminireo mpampiasa manana fitakiana tsotra, mahomby sy haingana kokoa. Ireo kinova Office vaovao, izay mifantoka aminny fifandraisana aminny tamba-jotra sosialy, dia mikendry ny hanome fiainana asa azo ampiharina mifanaraka aminny fampandrosoana. Manolotra fanalahidy manokana ianao eo aminny pejy andehananao misintona ny Office 2010. Azonao atao ny misintona ny Office 2010 aminny alàlanny fidirana aminity pejy ity ary tsy fanatanterahana ireo dingana ilaina. Ny endrika manandanja indrindra aminny Microsoft Office 2010 dia ny ahafahanao mifandray aminireo olona hafa ahafahanao maneho ny hevitrao sy mamaha ireo olana. Ny programa dia mamela anao hiditra aminny antontan-taratasinao Office na aiza na aiza aminny alàlanny PC, tranokala na smartphone. Microsoft Office Endri-javatra iray hafa ao dia ny fampitomboana ny vokatra aminny alàlanny fampifanarahana ny antontan-taratasinao. Aminizany fomba izany, na inona na inona sehatra ampiasainao hanovana ny antontan-taratasinao. Ho afaka hijery ireo fanovana aminny fotoana rehetra ianao.
Na dia maoderina kokoa aza ireo kinova vaovao anny Microsoft Office ary manana endri-javatra betsaka kokoa, ny Office 2010 dia mbola iray aminireo fandaharanasa suite malaza indrindra. Microsoft Office 2010, izay tianny mpampiasa maro, dia manohy manintona ny sainny mpampiasa betsaka noho ny fahatsorany sy ny fampiasana azy mora foana.
Miaraka aminny Office 2010, iray aminireo fonosam-pandaharana ilaina aminny solosaina ho anny fampiasana manokana na fandraharahana, azonao atao ny manomana antontan-taratasy, fampisehoana, seho an-tsary ary latabatra data mifangaro. Mila mitandrina anity fanamarihana manaraka ity ianao hampidinana ny Office 2010, izay manolotra ny fitaovana ilainao rehetra.
Fanamarihana: Tsy manolotra fanohanana fitsapana ho anny Office 2010 intsony i Microsoft. Noho izany, aminny alàlanny rohy Mividy dia azonao atao ny mizaha ireo kinova anny Microsoft Office izay mety aminao.
Fandraisana interface tsara
Fizarana antontan-taratasy an-tserasera aminny alàlanny SkyDrive
Fanohanana horonan-tsary PowerPoint
Mila tenimiafina Microsoft Live.
Haben'ny rakitra: 1.00 MB